ဟောငျးအိမ်သူအိမ်သားပုံစံသစ်ပြုပြင်ရေး | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
ChengLin ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါသည် ဟောငျးအိမ်သူအိမ်သားပုံစံသစ်ပြုပြင်ရေး အဟောင်းအိမ်သူအိမ်သားပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ။ ဒါဟာဂျပန်နိပွန်ဗိသုကာအင်္ကျီကိုမူပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအပေါ်ယံပိုင်းဆန်းသစ်နှင့်တိုးတက်လာသောဗဓေလသစ်နှင့်ရောထွေးက high-tech ဆီးနှင်းတိုက်တေနီယမ်အမှုန့်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ 90% နှင့်အတူအာရှအတွင်းပထမဆုံးဖြစ်သက်သေပြလျက်ရှိသည်။ anti-ခရမ်းလွန်အပူရောင်ပြန်ဟပ်မှုစွမ်းရည်, တကယ်ကစုပ်ယူအပူစွမ်းအင်ကိုလျော့ချ ဟောငျးအိမ်သူအိမ်သားပုံစံသစ်ပြုပြင်ရေး တည်ဆောက်ခြင်း, ပြင်မြို့ရိုးကိုကျယ်ပြန့်သည့်အတွက်အသုံးပြုရနိုင် ဟောငျးအိမ်သူအိမ်သားပုံစံသစ်ပြုပြင်ရေး ဘိလပ်မြေအမိုး, ဟောင်းအိမ်သူအိမ်သားပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမိုးလုံလေလုံမှန်အိမ်ဆောင်, ဟောင်းအိမ်သူအိမ်သားပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသည်မြို့ရိုး, အ unrusted သံဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အခြားအလွှာဟောင်းအိမ်သူအိမ်သားအဆောက်အဦး၏အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုကာကှယျတဲ့အလုပ်ကောင်းလုပ်ပါနှင့်တိုက်ရိုက်မိုးလုံလေလုံအပူချိန်လျှော့ချပေးပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်သူအိမ်သားအပေါ်တစ်ဦးအေးမြအာရုံဝတ်ဆင်တူ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအေးမြနဲ့အဆင်ပြေနေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်လွယ်ကူသည်။
ရာသီဥတုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုပမာဏ၏အထိ 10% အဘို့အပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်, လေအေးပေးစက်အကောင့်ရရှိသွားတဲ့အဖြစ်။ အအေးလေကြောင်းမှုတ်အဆိုပါဂေဟဗေဒဖျက်ဆီးမည်, သို့သော်မှုတ်မည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်အပူလေဖြတ်သို့မဟုတ်ပင်သေစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးအေးအခြားရွေးချယ်စရာ၏ search အတွက်အသစ်တစ်ခုအအေးအပေါ်ယံပိုင်းဆေးသုတ်နဲ့တူဟောင်းအိမ်၏မျက်နှာပြင်မှလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပူချိန်ကအနည်းဆုံး6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှအအေးခံရနိုင်ကြောင်းဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံစံ - 2-6
ရေ-based နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ,ခဲ add ကြဘူး,မာကျူရီ,ခရိုမီယမ်နှင့်အခြားလေးလံသောဒြပ်စင်များနှင့် Formaldehyde နှင့်အခြားအဆိပ်တ္ထုများ,အဆိပ်သင့်တ္ထုများပေါင်းထည့်ဖို့မအလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်,အသစ်ကနေအိမ်များသို့မဟုတ်အသစ်ပရိဘောဂတစ်ဦးရှိသည်ကြောင့်[အသစ်က]အရသာ,တကယ်တော့,ဒါကြောင့်ကင်ဆာ Formaldehyde ၏အရသာကိုဖြစ်ပါသည်,အခမဲ့ Formaldehyde မျက်စိကိုလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်,လည်ချောင်း,သေတ္တာ,စသည်တို့ကို.,ရှည်လျားသော-သက်တမ်းရှူရှိုက်မိပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖျက်ဆီးမည်'s ကိုတစ်ရှူး,ခန္ဓာကိုယ်နိုင်အောင်'s ကိုကိုယ်ခံစွမ်းအားလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်.
35%-40%Formaldehyde ဖြေရှင်းချက်လေ့ formalin အဖြစ်လူသိများသည်.
Formaldehyde resins အဆောက်အဦးပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုကြသည်,အထပ်သား,စောင်,သီးခြားထားခြင်း,သစ်သားထုတ်ကုန်,အခင်း,ဆေးရွက်,အလှဆင်ခြင်းနှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ.
မြင့်မားသောထား-အနိမ့်နှင့်အတူတန်း emulsion နှင့်အထူးတန်း Filler-အနံ့နည်းပညာ,ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်အနံ့အနံ့မရှိ,
ပုန်းခိုအာဏာနှင့်လွယ်ကူသောဆောက်လုပ်ရေးကောင်းသော.ဒါဟာတောက်ပနှင့်ရှည်လျားသောထရံအရောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်-ရွှဲ,ထိုသို့ညှိုးနွမ်းခြင်းနှင့် Discoloration အရောင်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်.
အသစ်အလုပ်လုပ်တဲ့အင်္ကျီထက်ပိုမို 310 ရှိ%အဆိုပါ elastic ဂုဏ်သတ္တိများ၏,နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကျဇယားထိရောက်စွာဟောင်းအိမ်၏နံရံတွင်ဒဏ်ငွေဒါကိုတော့ဖုံးလွှမ်း.အိမ်၏လှပသောရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်ရန်အတွက်,ဒါကြောင့်အနာဂတ်မှာမိုးလုံလေလုံရေ seepage နှင့်မြို့ရိုးကိုကင်ဆာများ၏ပြဿနာများကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်.ငလျင်မကြာခဏများမှာဘယ်မှာထိုင်ဝမ်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော.
ရေ-based အလုပ်လုပ်တဲ့ရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်းမြင့်မားသော၏ဖန်ဆင်းထားသည်-နည်းပညာ Eco-အပူအအေး-ထင်ဟပ်နည်းပညာနှင့်ဆွန်း insulator တွင်လည်းပုတီး.ဒါဟာမြင့်မားတဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓါတ်ရောင်ခြည်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုပေါင်းစပ်ပြီး,အပူလွှဲပြောင်းနှင့်အခြားဂုဏ်သတ္တိများလျော့ကျစေပါတယ်,ထိထိရောက်ရောက်ခြုံငုံအပူလျှပ်ကာအကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်,ကာရေ-based အပူ-ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်တီထွင်ကာကှယျအလုပ်လုပ်တဲ့ရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်း.
ဖြည့်စွက်ကာ,ဒါကြောင့်စူပါရာသီဥတုကိုအသုံးပြုသည်-ခံနိုင်ရည် MICA နှင့်အထူး elastic ပေါင်းစပ်ပေါ်လီမာဒြပ်ဗဓေလသစ်,အရာမြင့်သော elasticity ရှိပါတယ်,ကောင်းသောကျဇယား,နေရောင်ထိတွေ့မှုမှခုခံ,တင်းမာနှင့် embrittlement,နှင့်ကောင်းမွန်သောကော်နှင့်ကော်.ဒါဟာတာရှည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှိပါတယ်-သက်တမ်းရေစိုခံအကျိုးသက်ရောက်မှု.ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့အတူ-ဆန့်ကျင်သန့်ရှင်းရေး-fouling ဗဓေလသစ်,ကောင်းသောရေ-အခြေစိုက်ဆောက်လုပ်ရေး,ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနှင့်အနံ့-အခမဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများ,သင်အလွယ်တကူဟောင်းအိမ်သူအိမ်သားပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအိမ်မှာရေစိုခံတာနှင့်အပူလျှပ်ကာ၏နှစ်ဆကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်.